संसद भवनमा सर्वदलीय बैठकः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेमा विपक्षी गठबन्धन आशावादी « AayoMail
संसद भवनमा सर्वदलीय बैठकः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेमा विपक्षी गठबन्धन आशावादी
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर ,यो कुराले सभामुख अग्नि सापकोटा ढुक्क भएर बस्न सकेका छैनन्।
त्यसैले उनी कहिले पूर्वसभामुख, कहिले कानूनविद् त कहिले दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग छलफल परामर्श गरिरहेका छन्।
शुक्रबार संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा सभामुखले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्री र ३ जना अन्य नेताले सहभागिता जनाए।
जनताको सर्वोच्च संस्था पटक-पटक भत्काउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने ? शुक्रबारको छलफल यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भयो।
तर संसदमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको बात त लाग्दैन? छलफलमा यो विषय पनि उठ्यो।
राप्रपा नेता दीपक बोहोराले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा धेरै बोल्न नहुने कुरा राखे। ‘अदालतमा रहेको विषयमा धेरै बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै मेरो रह्यो,’बोहोराले छलफलबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने,’अन्य समसामायिक र जनताका दैनिक जीवनलाई प्रभावित पार्ने कुरामा छलफल भयो।’
तर पूर्वप्रधाननमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले भने अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा छलफल गर्न मिल्दैन भन्ने कुरामा कुनै तुक नरहेको बताए।
‘राज्यका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका सधैं माथि हो, नियम कानून संविधान बनाउने उसले हो। कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन र न्यायापालिकाले त्यसको करेक्सन गर्ने हो। बनेका ऐन,कानूनमा केही त्रुटि छन् भने हेर्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई नै हुनुपर्छ, हाम्रोमा त्यो अभ्यास छैन। तर सभामुखले जे पहल गर्नुभएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ,’भट्टराईले भने।
भट्टराईले लोकतन्त्र रक्षाका लागि सभामुखको पहल कदमी आवश्यक रहेको भन्दै आफूहरुको भरपूर सहयोग रहनेसमेत बताएका थिए।
यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान र लोकतन्त्र नै वर्तमान प्रधानमन्त्रीका कारण खतरामा पर्न लागेको भन्दै त्यसको रक्षार्थ एकजुट हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरु एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ, १४९ जनाले हस्ताक्षर गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी लाँदासमेत राष्ट्रपतिले लत्याएर जसरी संसद भंग गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक छ भन्ने नै हाम्रो ठहर रह्यो,’बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको न्यायालयमाथि विश्वासरहेको भन्दै यसपटक पनि संसद पुनर्स्थापना हुने बताए। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर दाबीका लागि जाँदासमेत राष्ट्रपतिले सदर नगरेर बदमासी गरेको उनले बताएका थिए।
यता एमालेबाट निष्कासनमा परेका भनिएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालले भने संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत र प्रतिगामी रहेको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए। ‘माधव नेपालले त पार्टीमा उठिरहेको कुरा नै उठाउनु भयो। उहाँले माफी माग्नु पर्छ। माफी मागे ठीक हुन्छ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो,’छलफलमा सहभागी एक नेताले भने,’उहाँहरु प्रणाली रक्षार्थ होइन आफ्नै स्वार्थका लागि लागिरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो कुरा सुन्दा।’ बैठकमा झलनाथ खनालले जुममार्फत् सहभागिता जनाएका थिए।
छलफलका क्रममा डा. भट्टराईले पुनःस्थापना नभए प्रतिनिधि सभा आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए। तर उनलाई बीचैमा रोक्दै कांग्रेस सभापति देउवाले अदालतमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन, अदालतमाथि विश्वास गर्नुपर्छ,’देउवाले भनेका थिए।
साना दलको आक्रोश
छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले अफ्ठ्यारोमा साना दल खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाए। ‘लड्ने बेलामा साना पार्टी चाहिने, अरु बेला थ्रेसहोल्ड भनेर अराष्ट्रिय पार्टी भन्ने,’छलफलमा सुवालले आक्रोशित भावमा प्रश्न गरेका थिए।
उनले राजनीतिक राष्ट्रिय दल हुन चाहिने ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विषय पनि धेरै समस्याको कारक भएको बताए।
‘राजनीतिक दलहरुले दीर्घकालीन सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ। ऐनमा थ्रेसहोल्ड राख्ने अहिले प्रजातन्त्रमाथि घात भयो भन्न मिल्छ?,’छलफलमा भनेको कुरा सम्झँदै सुवालले आयोमेलसँग भने,’प्रजातन्त्र सबै प्रकारका फूलहरु फुल्ने बगैंचा हो। एउटै प्रकारका फूल भएको बगैंचा रमाइलो हुन्छ? त्यसैले देश र जनताको सेवा गर्न धेरै पार्टी आउनुपर्छ। जसले देशको घात गर्छ, त्यो जनताबाटै टाढा हुन्छ, तर जबरजस्ती ऐनमा राखेर अराष्ट्रिय पार्टी बनाउने अहिले प्रतिगमन भयो भनेर त्यही साना पार्टी चाहिने? भागबण्डा खानेबेलामा पालैपालाे खाने हो ?’
चुरे दोहनको कुरा
छलफलमा संसद विघटनका अलावा चुरे दोहनको विषय पनि दलका नेताले उठाए। ढुंगा,गिट्टि, बालुवा निकासी गरेर ब्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीतिले देशलाई खोक्रो बनाउने भन्दै उनीहरुले यसका विरुद्ध एकजुट भएर लाग्नु पर्ने साझा धारणा छलफलमा राखेका थिए।
तर केहीले भने चुरे दोहन कुन सरकारबाट सुरु भएकाे हाे त्यसको छानबिनको कुरा उठाउनु पर्ने धारणासमेत राखेका थिए। यसबाहेक छलफलमा कोरोना संक्रमणबाट बच्ने एउटै अस्त्र खोप भएको भन्दै सबै नागरिकको पहुँचमा खोप पुर्‍याउने सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने कुरा पनि उठाएका थिए।